▷ Ihe kpatara na akpọghị mgbawa flagship Qualcomm ọzọ Snapdragon narị asatọ na iri itoolu na asatọ - 【 Comparison】 2022
Kedu ihe kpatara na akpọghị mgbawa flagship Qualcomm Snapdragon aha narị asatọ na iri itoolu na asatọ
Site na: 39 (Periscopi)
Santos Torres, Nlekọta (Onye ode akwụkwọ)
Ụbụrụ silicon nke nwere ike inye ekwentị gị ọzọ ka ekpughere, na megidere asịrị, a gaghị akpọ ya Qualcomm Snapdragon narị asatọ na iri itoolu na asatọ.
Nke a bụ chipset ọhụrụ anyị na-atụ anya ịhụ na ekwentị dị elu na-abịa dị ka Samsung Galaxy S22, OnePlus iri, Xiaomi iri na abụọ na ndị ọzọ. A ga-akpọ ya Qualcomm Snapdragon 1 Gen XNUMX, ma ị nwere ike ịgụ ihe niile ịchọrọ ịma na nke a ebe a.
Ụgbọ elu na ebe obibi maka mmemme mmalite a bụ Qualcomm kwadoro, mana nkwenye na-egosipụta echiche nkwuwapụta nke onye dere ya.
Ma n'ihi gịnị ka e ji nye ya aha ọhụrụ? Ụdị aha dị iche iche nwere ike ịgbagwoju ndị mmadụ anya, karịsịa n'ihi na nke a abụghị ngwaahịa ọgbọ mbụ. N'ezie, Qualcomm na-eme chipsets na-enye ụfọdụ ekwentị ndị ama ama kemgbe puku abụọ na iri na abụọ.
Anyị na Qualcomm kwurịtara banyere aha ọhụrụ ahụ, nke a mere ụlọ ọrụ ahụ ji kpebie ịkwaga ya na XNUMX ... na ndị ọzọ ebe ahụ.
Nke mbụ, olee otú aha ọhụrụ a si arụ ọrụ? Qualcomm Snapdragon 1 Gen 1 bụ aha chipset ọhụrụ ahụ, ọgbọ ndị ga-abịa n'ihu nke usoro Qualcomm dị ala ga-aga n'ihu na mgbakọ a, dịka ọmụmaatụ Snapdragon 1 Gen XNUMX ma ọ bụ Snapdragon XNUMX Gen XNUMX.
A ga-eji mgbanwe a na nhazi aha mee ihe na mgbanwe teknụzụ ụlọ ọrụ ọ bụla kemgbe ewepụtara ya. Tụgharịa na mbụ ewebata ya na Snapdragon asatọ usoro.
Ọ ka bụ usoro nke Snapdragon asatọ na iri asatọ na asatọ Plus nke ewepụtara na mbido afọ a, na-eme ka ọ bụrụ ọkọlọtọ ụlọ ọrụ maka puku abụọ na iri abụọ na abụọ.
Ziad Asghar, osote onye isi oche njikwa ngwaahịa na Qualcomm, gwara LaComparacion: “Ndị mmadụ maara na asatọ bụ n'ezie ọkwa kachasị elu anyị nwere. Yabụ na anyị chere na anyị ga-eme ka nke ahụ dị mfe, ka anyị kpọọ ya Snapdragon asatọ.
"A ga-akpọ nke a Snapdragon asatọ Gen 1, mgbe ahụ, ka anyị na-aga n'ihu, anyị ga-akpọ ya Gen abụọ, Gen atọ, na ndị ọzọ. Echere m na ọ na-eme ka ihe dị mfe ma ọ dịghị mkpa icheta nọmba 3.
Ma ọ bụ n'ụzọ doro anya ọnụọgụ 4, na-eche na ha ga-agarịrị elu ka Snapdragon asatọ na iri itoolu na asatọ.
O doro anya na ndị ọrụ na-ahọrọ ya
Dị ka nyocha nke Qualcomm si kwuo, ọha na eze na-ahọrọkarị nhazi aha ọhụrụ a site na nha ise ruo 1. Ndị na-anụ ọkụ n'obi ekwentị nwere ike ịmara ya ntakịrị, mana echiche bụ na ọ ga-eme ka ọ dịrị onye na-azụ ahịa mfe ịghọta ihe ekwentị. bụ silicon. na-agba ọsọ na ngwaọrụ gị.
Debra Marich, onye isi onye isi ahịa ahịa ngwaahịa na Qualcomm, gwara LaComparacion n'oge mkparịta ụka nke chipset ọhụrụ: “Anyị na-ewusi ika Snapdragon anyị ike dị ka akara ngwaahịa nọọrọ onwe ya maka ndị ọrụ na anyị ga-erite uru nke izi ezi. Nke anyị webatara na akara Snapdragon kacha ọhụrụ n'ime afọ iri gara aga.
Ọ bụghị naanị aha izugbe nke nyiwe Snapdragon na-agbanwe. Asghar kwadoro LaComparacion na ụlọ ọrụ ahụ na-agbanwekwa aha nke ihe ndị ọzọ mejupụtara ikpo okwu.
Asghar kwuru, sị: 'N'okpuru anyị nwere teknụzụ dị ka Hexagon XNUMX processor. Ya mere, anyị na-ewerekwa [aha] ndị a, nke ejikọtara ha ugbu a na ọgbọ ọ bụla nke Snapdragon asatọ. Nke ahụ na-eme ka ọ dị mfe n'ezie.
Na-atụ anya ịhụ nhazi aha ọhụrụ a na ngwaahịa Qualcomm maka ọdịnihu a na-ahụ anya. Anyị agaghị enwe Snapdragon asatọ na iri itoolu na asatọ, mana ọ bụ otu chipset ma e wezụga aha ahụ, anyị ga-achọ Snapdragon asatọ Gen abụọ na njedebe nke iri abụọ na abụọ.